musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Breaking Tanzania News » Chitsuwa chevashanyi cheZanzibar chinorambidza kutengesa doro
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Breaking Tanzania News • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Culinary • tsika nemagariro • Hurumende Nhau • Health News • Hospitality Industry • Nhau Dzakanaka • nhau • vanhu • Resorts • Kutarisirwa • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Zvakavanzika Zvokufamba • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • Akasiyana Nhau • Waini & Midzimu
Kumiswa kwechinwiwa chinodhakisa hakukanganise mahotera epamusoro evashanyi uye zvimwe zvivakwa zvinoshandira vashanyi vekunze
Zanzibar yamisa kupinza, kutengesa uye kunwa zvinwiwa zvinodhaka
Kutengeswa kwedoro, waini nemweya kuchangovharirwa chete kumahotera anopa vashanyi vekunze
Hupfumi hweZanzibar hunowanzoenderana nekushanya nekutengeserana nedzimwe nyika
Chitsuwa cheIndian Ocean chevashanyi Zanzibar yakamisa kupinzwa kunze kwenyika, kutengesa uye kunwa zvinwiwa zvinodhaka mukati memwedzi unoera weRamadan nekuyambira zvakasimba kune vanotengesa uye vanotengesa doro pachitsuwa ichi.
Liquor Board Executive yeZanzibar yakati mukuzivisa kwayo svondo rino kuti kumiswa kwekutengeswa kwezvinwiwa zvinodhaka hakuzokanganisa mahotera epamusoro evashanyi nedzimwe nzvimbo dzekuvaraidza nedzokugara dzinoshandira vashanyi vekunze.
Bhodhi rakati danho rekuvhara zvitoro zvakatsanangurwa muchikamu 25 (3) (4) chinorambidza kupinzwa nekutengeswa kwedoro mukati memwedzi unoera weRamadan.
Kutengeswa kwedoro, waini nemweya kuchangovharirwa chete kumahotera nedzimwe nzvimbo dzinoshandira vashanyi vekunze vanoshanya pachitsuwa ichi.
Kurambidzwa kwezvinwiwa zvinodhaka kwave kumisikidzwa mushure mekunge hurumende yechitsuwa ichi yaona kuti vamwe vanhu nenzvimbo, kusanganisira mabhawa, vanga vachipokana nemutemo uyu nekuenderera mberi nekutengesa nekumwa doro mukati memwedzi unoera weRamadan unocherechedzwa pachitsuwa ichi.
Zanzibar yakanyanya kuve vechiMuslim uye vese vagari vanotarisirwa kutevedzera tsika yechiIslam yekutsanya kubva mambakwedza kusvika manheru panguva yeRamadan. Iwo maresitorendi anoramba akavharwa mukati mezuva nevanhu vashoma mumigwagwa.
Iine huwandu hwevanhu vangangoita 1.6 miriyoni, hupfumi hweZanzibar hunotarisana nekushanya nekutengeserana kwepasi rose
Kubhengi panzvimbo yayo munzvimbo yeIndian Ocean, Zanzibar ikozvino yave kuzvimisikidza pachayo kukwikwidzana nedzimwe nyika dzezvitsuwa mukushanya, oiri uye zvimwe zviwanikwa zvegungwa.
Maketani epahotera epasi rose akasimbisa bhizinesi ravo mukati memakore mashanu apfuura, zvichiita kuti chitsuwa ichi chive imwe yenzvimbo dzinotungamira dzekudyara hotera muEast Africa.
Mutungamiri weZanzibar, Dr. Hussein Mwinyi vakati hurumende yavo yave kutarisira kukwezva varimi vakawanda mumabasa emahotera nekushanya netarisiro nyowani yekuita kuti Indian Ocean Island ive nzvimbo inokwikwidza kushanya.
Chitsuwa ichi chave chiri chinangwa chevashanyi vekumusoro-soro, vachikwikwidza zvakanyanya neSeychelles, Mauritius, Comoro neMaldives.
Kuratidzira kwekushanya muchikepe kunobatanidza chitsuwa ichi nemamwe madhipatimendi eIndia Ocean eDurban (South Africa), Beira (Mozambique) neMombasa pamhenderekedzo yeKenya.